जन्मिन नपाएका नानीहरू
निलम निहारिका, (नर्थ क्यारोलाइना )
हतार–हतार घरबाट बाहिरिन्छु, केही दिन भयो शोधकार्यमा व्यस्त छु । मेरो शोधकार्य–एक नवीन तथ्यको खोजीः नवज्ञानोन्मुख क्रियाकलाप ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
बौद्धिक खोजपूर्ण क्रियाकलाप । मभित्र अटेसमटेस प्रश्न छन् । अन्तर्वार्ता–प्रश्न, अवलोकन फाराममा प्रश्न छन् । प्रश्नको ठेली बोकेर केही दिनको नियमित दिनचर्याझैँ पुग्छु उही क्लिनिकमा । एक विख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञको क्लिनिक ।
मेरो शोधप्रश्नको विषय– जन्मन नपाएका नानीहरू
मेरो शोधको प्रयोजन– उपाधि हासिल गर्नु
शोधको क्षेत्र– भ्रूणहत्याको अध्ययन र विश्लेषण
शोधशीर्षक चयनका आधार– मेरो रुचि, सामग्रीको उपलब्धता, आजको आवश्यकता, अनि स्वयम् मेरै व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव र दक्षता ।
शोधको औचित्य– वास्तवमै भन्ने हो भने आत्मसन्तुष्टि ।
म शोधार्थी, आफैसँग र ती आमासँग ।
ममा धैर्य छैन तर तृष्णा छ । लगनशील छु । पूर्वाग्रह हुन्छ– हुन्न, म भन्न सक्दिनँ । ममा ज्ञान छ, अभ्यास छ ।
रातो फाइल बोकेर दिनहुँजस्तै, म आज पनि उपस्थित हुन्छु क्लिनिकमा । म पुग्दा क्रमबद्ध मिलेर लस्करै कुर्सीमा बसेका छन् ‘आमाहरू’, सन्तानको हत्या गर्ने पालो पर्खेर । आतुर छन् आमाहरू बेचैनी छ, पालो कहिले आउने हो मेरो ? पल–पलको हतारो छ । पटक–पटक सोध्छन्, अब मेरो पालो कहिले ? मेरो बेला भएन ? छिट्टै गरिदिनुस् न ! ऊभित्रको नानी पनि पर्खेर बसेको हुन सक्छ– कहिले पूरा हुने नौ महिना अनि च्याँ–च्याँ गर्दै यो धर्तीमा सफल अवतरण गर्ने ? सपना देख्दा हुन् सुन्दर संसारको ।
आमाको पेटभित्र पाठेघर, पाठेघरभित्र तरलपानी, पानीभित्र सुरक्षाको जाली, जालीभित्र ऊ । प्रकृतिले कति सुरक्षा दिएकी नानीका लागि न्यानो सुरक्षा । सुरक्षामा मस्त सुतेको ऊ । ऊ, आफ्नो हत्याको तयारीबाट कति अनभिज्ञ ! शङ्का छैन कुनै । आफ्नै आमामाथि शङ्का ऊ कसरी गर्न सक्छ ? ऊ मस्त छ । नौ महिना गनिरहेछ । सबैसँग अपरिचित उसले चिनेको–जानेको छ त आफ्नै आमाको तातो रगत जानेको छ । अरू नाता–सम्बन्धसँग अहिले के सरोकार ?
ऊ जन्मँदा पहिलो बोली च्याँ गरी रुनुपर्छ । रोएपछि जीवनको सुरुवात हुन्छ । अब ऊ रुन नपाउने त ?
भ्रूण सोच्दो हो– ‘मेरी आमाले प्रसववेदना सहेर यस धर्तीमा टेकाउनेछिन् । धन्य आमा धन्य, तिमी पूजनीय छौ ।’
आमाहरू क्रमबद्ध बसेका छन् आफ्नो सन्तानको हत्या गर्ने पालो पर्खेर । भित्री कोठाको एक कुनाा बसेर म झ्यालबाट चियाइरहेकी छु । अवलोकन गरिरहेछु । मेरो पालो आयो । अब प्रतीक्षा सकिएकोमा दङ्ग पर्दछन् पालो आउनेहरू । प्रत्येक आमाले आफ्नो गर्भ मिल्काउनुअगाडि मलाई भेटेर छोटो वार्तालाप गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ । म त्यहीँको कर्मचारीजस्तै भएर बसेकी छु पोसाक परिवर्तन गरेर । मैले जम्मा लिने सेम्पल सय । म क्रमशः अन्तर्वार्ता लिन्छु ।
१. नाम – रीता सिम्खडा
वर्ष – ३५
ठेगाना – ललितपुर, इमाडोल
पेसा – नोकरी
गर्भपतन गराउनुको कारण – दुइटा छँदै छन्, अब नपाउने, पुग्यो । नराख्ने भन्दाभन्दै बसिहाल्यो ।
२. नाम – अञ्जना थापा
वर्ष – ३२
ठेगाना – कैलाली, टीकापुर
पेसा – गृहिणी
कारण – तीनवटी छोरी छन्, अहिले पनि छोरी नै छ रे ।
३. नाम – प्रिया पोखरेल
वर्ष – २२
ठेगाना – झापा
पेसा – कुखुरापालन
कारण – (मौन) । उसले अर्की स्वास्नी लिएर भाग्यो । (अनुहारमा घृणा र रीस छ ।)
४. नाम – नम्रता जोशी
ठेगाना – सिन्धुलीमाढी
पेसा – अध्ययन
कारण – (मौन–मौन–मौन) ‘विवाह भएको छैन हो ? केही छैन मसँग लुकाउनु पर्दैन ।’ म उसको हात सुमसुम्याउँछु, नम्रता आँसु चुहाउँछे ।
– ‘कसरी भयो ?’
– ‘मैले ठूलो विश्वास गरेँ, उसले धोका दियो । बिहे गरेन ।’
५. नाम – कोपिला श्रेष्ठ
वर्ष – २९
ठेगाना – तानसेन, पाल्पा
पेसा – व्यवसाय (ब्युटीपार्लर)
कारण – एउटा छ, धेरै पाएर के गर्नु ? शिक्षा–दीक्षा, खान–लाउन राम्रो दिन सकिँदैन ।
६. नाम – कुमारी चौधरी
ठेगाना – कपिलवस्तु
पेसा – कृषि
कारण – पाँच जना छन् । फेरि... ना बाबा ना... अब पुग्यो ।
‘पुग्यो त किन ? बन्द गर्नु पर्दैन ?’
– ‘मान्दैनन् । मान्दै मान्दैनन् लाहानीका बाबुले ।’
७. नाम – कमला प्रसाईं
वर्ष – १९
ठेगाना – धरान
कारण – बिहे गरेको तीन महिना मात्र भएको थियो । घरमा भिœयाएका पनि छैनन्, श्रीमान्लाई गोली लागेर हुनु हुन्न । राख्न चाहन्थेँ । पाउन चाहन्थेँ तर के गर्नु ?
८. नाम – सम्झना ओझा
वर्ष – २८
ठेगाना – विराटनगर
कारण – ‘श्रीमान् तीन वर्ष भयो विदेश गएको आइस्या छैन ।’ लाज मान्दै भन्छे ।
९. नाम – रीता गुरुङ
वर्ष – २४
पेसा – होटल व्यवसाय
ठेगाना – पर्सा
कारण – यसलाई कसले स्वीकार्छ ? को बाबु बन्छ ?
१०. नाम – सविना नेपाली
वर्ष – १६
ठेगाना – पोखरा
कारण – चार महिनाअघि सामूहिक बलात्कार, बलात्कारी निर्दोष साबित ।
११. नाम – डोल्मा शेर्पा
वर्ष – ४६
ठेगाना – काभ्रे
कारण – चालीस वर्ष काटिसकेँ नाति–नातिना जन्मिसके, अब समाजले के भन्छ ?
पालोमा परेकाहरूलाई प्रश्न गर्दै जान्छु ।
यो क्रम चलिरहेछ केही दिनदेखि ।
हत्याको प्रत्यक्षदर्शी म ! हत्यामा संलग्न छन् डाक्टर, नर्स । सहयोगी छन् नानीका बाबु–आमा, आफन्त जो सबैभन्दा नजिकका छन् ।
प्रत्यक्षदर्शी म– तर यो हत्याको न मलाई कहीँ बयान दिनु छ, न कहीँ सुनुवाइ नै हुन्छ । हत्या भइरहेछ धमाधम ।
अर्को दिन, म त्यही ठाउँमा पुग्छु, ठीक त्यही समयमा ।
आपूmसँग भएको अवलोकन फाराम भर्छु । अन्तर्वार्ता पथमादर्शिका भर्छु । मेरो काम शोधकार्य पूरा गर्नु मात्र न हो ।
गर्भपतन गराउनु या नानीहरूको अकाल हत्याको कारण आज जे मैले सुनेँ यस्तो छ, प्रस्तुत गर्छु–
– विदेश जान लागेकी छु त्यसैले ।
– मेरो पढाइ पूरा भएको छैन, पढाइमा बाधा पार्छ ।
– श्रीमान्को पहिलाकी श्रीमतीपट्टिबाट नै छोरा–बुहारी, छोरी–ज्वाइँ सबै छन् । मैले नपाउने सर्तमा बिहे भा’को रे । मेरै बुवासँग त्यही दिन कुरा भा’थ्यो भन्छन् ।
– मालिक्नीले थाहा पाए बित्यास परिहाल्छ नि ! कहाँ मालिक कहाँ म ?
– बल्ल एघार पढ्छु, ऊ बाह्रमा । हाम्रो अहिले बिहे गर्ने बेला पनि त भा छैन ।
– पाल्न सकिँदैन हजुर । रहर’थ्यो नि ! श्रीमान् सधैँको बिरामी । आज मजदुरी नगरे भरे मुखमा माड लाग्दैन ।
– हामीलाई निको नहुने सरुवा रोग लागेको छ ।
– बन्दुकको कुन्दाले हिर्कायो, बच्चा भित्रै मरिसकेछ ।
– कलाकारको बिहे हुँदैमा त दर्शकको क्रेज घट्दो रहेछ । केही वर्ष नपाउने, अझै केही गर्नु छ, अहिले क्रिएसनको बेला हो, कसरी आफ्नो क्यारियर बिगार्नु ?
– हाम्रो धन्दामा बच्चा भए फाल्नुपर्छ, जन्माउन कहाँ पाइन्छ र ?
– उसले भूmटो माया गरेको रहेछ, मैले त चोखो सम्झेँ । जन्माउन त इच्छा थियो तर... ।
– आफ्नै नाताभित्रको, हाडनाताको सम्बन्ध ।
हातको सेता पन्जा रगतले लतपतिएको छ । डाक्टरले एउटा भ्रूणलाई वकेटमा मिल्काएपछि, अर्को मिल्काउने तयारीमा नयाँ पन्जा फेर्छ । रगत नलागेको कीटाणुरहित पन्जा ।
कुनै बेला सुनिन्छ आमाको चीत्कार । ऐया ! मैले सुनेँ, अरूले पनि सुने आवाज, आमाको । तीखो औजारले छेडीछेडी– टुक्रा–टुक्रा पार्दा नानी पनि ऐया गर्दा हुन् । आमाकै गर्भमा चिच्याउँदा हुन् नानी । स्वयम् आमासँग पनि पुग्न पाउँदैन उनीहरूको चीत्कार । उनीहरू टुक्रा–टुक्रा भएर फोहोरको डङ्गुरभित्र बाल्टीमा मिल्कन्छन् ।
दिनहुँ, दर्जनौँ भ्रूणहरूको एकै अवशेष ।
नानीहरूको हत्यामा मृत्युगीत गाइदिने कोही छैन । हत्याविरुद्ध जुलुस छैन, नारा छैन, तोडफोड केही छैन । मात्र हत्यामा संलग्न रहनेहरू पैसाको लेनदेख गर्छन् र बाटो साट्छन् ।
मेरो कोख दुख्छ चसक्क ।
मेरो तथ्याङ्क सङ्कलनको अन्तिम दिन ।
मेरो तथ्याङ्कभित्र परेका सय नानीहरू एकै चिहानमा जलिसकेका छन्, फोहर जलाउने मेसिनभित्र चर्को रापमा दनदनी ।
यतिबेला शोकधुन कुनै बज्दैन, यतिबेला शोकको आँसु कतै झर्दैन । मातृहृदयसमेत चस्कन्न चसक्क ।
नानीहरू खरानी भइसके । मसँग अवशेष छ सङ्कलित खेस्रा सामग्री ।
मैले त्यसको अध्ययन, प्रशोधन, व्यवस्थापन, सम्पादन गर्नु छ कागजको पानामा ।
सय नानी हत्याको वर्गीकरण, तालिकीकरण गर्नु छ । चित्रात्मक प्रस्तुति गर्नु छ डन्डारेखामा बाँड्नु छ, वृत्तरेखामा कोर्नु छ, प्रतिशतमा बागडोर गरेर रेखाचित्रमा ढाल्नु छ ।
नानीहरूको हत्याको व्याख्या, विश्लेषण गर्नु छ, खण्डनमण्डन, संशोधन गरी निष्कर्ष निकाल्नु पनि छ ।
सम्पूर्ण सय नानीहरूको हत्याविवरण बोकेर म फर्किरहेकी छु घरतिर ।
मैले अब टङ्कन गरेर सुन्दर गाताबन्दीमा पेस गर्नुपर्छ जन्मन नपाएका नानीहरूको कथा ।
सुन्दर गाता नानीहरूका लागि सुन्दर नाना ।
मेरो अघिल्तिर नानीहरू छुनमुनछुनमुन गर्दै हिँडेका छन् । ता... ताते... ताते..., बामे सरेका छन् । पूmलजस्ता कोमल पुष्प । सुनौला हातहरू, सुनकेस्रा कपाल, गुलाबी छाला, सुन्दर आँखा । खेल्छन्, कुद्छन्, छरपस्ट बाटोमा म बाटो मोडिन्छु ।
अर्को घुम्तीमा भेट्छु स्कुलको पोसाकमा लामबद्ध नानीहरू, मलाई बिदाइको हात हल्लाउँदै, बाटो मेरै अघिल्तिरबाट ।
म गन्दै जान्छु एक दुई तीन... अन्ठानब्बे, उनान्सय, सय र एक सय एक । एक सय एकले मलाई फर्की–फर्की हेर्छ दुरुस्त म, मेरो बचपनको फोटोजस्तै । म हेरिरहन्छु ।
म भुइँमा बस्छु थचक्क । टाउको उठाउँछु बिस्तारै । त्यहाँ केही छैन, उदाङ्ग सडक र सडकछेउमा पुनःनिर्माणका लागि भत्काउँदै गरिएको पुरानो घरबाहेक ।
मेरो कोख दुखिरहन्छ मन्द–मन्द ।
छोटा र मीठा शब्दको बान्कीमा बुनिएको कथा . आज बल्ल फुर्सद मिलाएर पढें .